Pep Guardiola Ayaan Ku Soo Celinayaa Barcelona Haddii.........Joan Laporta Oo Jamaahiirta Barca Qalbi Kiciyay. - Gool24.Net
Pep Guardiola Ayaan Ku Soo Celinayaa Barcelona Haddii………Joan Laporta Oo Jamaahiirta Barca Qalbi Kiciyay.
May 12, 2020 Mahamoud Batalaale
Madax waynihii hore ee kooxda Barcelona ee Joan Laporta ayaa ku dhawaaqay in uu musharax u yahay doorashada madaxtinimo ee Camp Nou ka dhici doonta sanadka soo socda wuxuuna balan qaaday in uu Pep Guardiola dib ugu so celin doono in uu kooxda tababare ka noqdo.
Joan Laporta ayaa kooxda Barcelona madax wayne ka ahaa waqtigii ugu fiicnaa ee uu Pep Guardiola guulaha waa wayn gaadhsiiyay wuxuuna ahaa shaqsigii aduunka baray Guardiola ee ku aaminay shaqada kooxda Barca isaga oo aan wax khibrad ah lahayn.
Joan Laporta ayaa Barcelona madax wayne ka soo ahaa intii u dhexaysay 2003-2010 kii wuxuuna hadda ka mid noqday musharixiinta la tartami doona Bartomeu kaas oo loo arko mid burburiyay Barca isla markaana kooxda dhex galiyay xalaado ay adag tahay in si sahlan lagu xaliyo.
Sanadkii 2008 kii ayay ahayd markii uu Joan Laporta oo ahaa madax waynaha Barcelona uu go’aan ku gaadhay in uu Guardiola u magacaabo Barca waxaana fursadii uu siiyay ay Guardiola ka dhigtay mid ka mid ah tababarayaasha taariikhda kubbada cagta ugu fiican.
Guardiola oo hore u shaaciyay in aanu waligii dib ugu soo laaban doonin Barcelona isaga oo tababare ah ayay suurtogal noqon kartaa in uu tixgalin siiyo madax waynihii aduunka isaga baray ee Joan Laporta haddii ay dhacdo in markale loo doorto xafiiska madax waynaha Camp Nou.
Guardiola ayaa hadda Manchester City heshiis kula jira kaas oo dhacaya June 2021 waana isla waqtiga ay doorashada madaxtinimo ee Barca dhacayso taas oo haddii uu Joan Laporta soo baxo siinaysa in Guardiola oo heshiiskiisu dhamaanayo uu heli karo.
Laakiin ganaaxa la saaray Manchester City ee ayna labada sanadood kaga ciyaari doonin Champions league ayaa shaki wayn galinaysa mustaqbalkiisa Etihad Stadium taas oo Joan Laporta dhiiro galin wayn u ah haddii uu soo baxo.
Ugu horayn Joan Laporta oo ku dhawaaqaya musharaxnimadiisa madaxtooyada Barca ayaa yidhi: “Anigu waxaan ka shaqaynayaa in aan naftayda idiin baro ka musharaxa madax wayne. Anigu hore ayaan madax waynaha u soo noqday, waxaanan ku faraxsanahay in aan ku soo laabto”
Intaas kadib Joan Laporta ayaa soo bandhigay hamigiisa ah in uu Pep Guardiola dib ugu soo celiyo Barcelona si uu tababare uga dhigto haddii uu soo baxo wuxuuna yidhi: “Waxaan aad u jecelahay in aan soo celiyo Guardiola, laakiin hadda waxa uu joogaa City waana go’aan ay waajib noqonayso in uu Pep qaato. Isagu tixraac ayuu Barcelona u yahay, in badan oo ka mid ah dadka Catalonia waxay jeclaan lahaayeen in uu isagu markale Barca tababaro”.
Laporta ayaa sii qalbi qaaday taageerayaasha kooxda Barcelona wuxuuna yidhi: “Waqtiga ku haboon, shaqsiga ayaan la hadli doonaa kaas oo aan filayno in uu Barca tababare u noqon doono laga bilaabo 2021”.
Guardiola ayaa Barcelona kula soo guulaystay 14 koob oo ay ku jiraan saddex koob oo horyaalka La Liga ah, laba koob oo Champions league ah ka hor intii aanu Camp Nou ka bixin sanadkii 2012.
Barcelona ayaa xaaladii ugu xumayd ku jirtay xiliyadii la soo dhaafay waxaana kooxda gilgilay maamul xumo iyada oo ay lix agaasime hal mar iska wada casileen waxaana hadda la dareemayaa in waqtigii Bartomeu uu soo dhamaanayo.